ko htike's prosaic collection: နှိုးဆော်ချက် (နိုင်ငံခြားရောက် မဲ ပေးမည့် သူများ မဲ မပေးခင် အရင် လုပ်ဆောင် သင့်သည်များ)
နှိုးဆော်ချက် (နိုင်ငံခြားရောက် မဲ ပေးမည့် သူများ မဲ မပေးခင် အရင် လုပ်ဆောင် သင့်သည်များ)
ကမ္ဘာ့အရပ် အသီးသီးမှ မြန်မာသံရုံးများတွင် မဲ သွားရောက် ပေးမည့် မိတ်ဆွေများ ခင်ဗျာ ...... ။
မဲ သွား မပေးခင် ...... ညီ၊ အစ်ကို တို့ ပင်ပင်ပန်းပန်းရှာထားသော အခွန်များကို စား၍ လစာ ယူနေကြသော သံရုံး ဝန်ထမ်းများကို အောက်ပါ မေးခွန်းများ အရင် (အချိန် သီးသန့် တရက် ယူ၍ သွားရောက်ကာ) မေးစေလိုပါသည်။
၁။ အခြေခံဥပဒေ မူကြမ်း စာအုပ်သံရုံးမှာ ရနိုင် ပါသလား။ ကျွန်တော်/ကျွန်မတို့ ဖတ်ရှုလိုပါသည်/ ဝယ်ယူလိုပါသည်။
(၁.က) မရှိဘူး ဆိုလျှင် ... မှာလို့ ရနိုင်မည်လား၊ မဲ မပေးခင် အချိန်မီ ရနိုင်မည်လား၊ အဆိုပါ မဲ ရယူမည့် စာအုပ်မရှိပဲ မည်သည့် အရာကို မဲပေးရမည်နည်း။ အခြေခံဥပဒေ မူကြမ်းဆိုတာ ဘာမှန်း မသိဘဲနှင့် မည်သို့ မဲ ပေးကြရမည်နည်း။
(၁.ခ) စာအုပ် မရှိလျှင်၊ မှာ၍ မရလျှင် ..... အစိုးရ ဝန်ထမ်း တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ အနေဖြင့် ဤ အခြေခံ ဥပဒေပါ အဓိက အချက်များကို ရှင်းလင်း ပြပေးပါ။ (သူတို့ ရှင်းပြခဲ့သော် ...... ရှင်းပြသည့် အချက်များတွင် မေးချင်သော၊ မရှင်းသော၊ တရားနည်းလမ်း မကျသော အကြောင်းများ ပါလျှင် ထောက်ပြ မေးမြန်းကြပါ။)
၂။ မဲ ကို မည်သည့် စနစ်/ပုံစံဖြင့် ကောက်ယူပါသနည်း။ မဲ ခိုးမူ၊ လိမ်မူများ မဖြစ်အောင် မည်သို့ ကာကွယ်ထားသနည်း။
၃။မဲ ကို မည်သည့် ယုံကြည်ရသော ပုဂ္ဂိုလ်များက မည်သည့် စနစ် ပုံစံဖြင့် ရေတွက်မည်နည်း။ (အဆိုပါ အစိုးရ ဝန်ထမ်းဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ်များကို လုံးဝ မယုံရသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။)
၄။ မဲ စာရင်းကို သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံအလိုက် မည်သည့် အချိန်တွင် ကြေငြာမည်နည်း။
မဲ ကောက်ယူသော အစိုးရဝန်ထမ်းများသည်ပင် အခြေခံ ဥပဒေကို မသိ၊ ........ မည်သို့ မည်ပုံ မဲရေတွက် ကောက်ယူမည်ကို မသိ၊ ...... မဲ စာရင်း လိမ်လည်မူများ ရှိနိုင်၊ မရှိ နိုင်ဆိုတာကို မသိလျှင်၊ ....... အဆိုပါ ဆန္ဒ ခံယူပွဲသည် မည်သို့မှ တရားမျှတမူ မရှိနိုင်ပါ။
ထို တရား မျှတမူ မရှိသော ဆန္ဒခံယူပွဲမှ ထွက်လာသော အခြေခံ ဥပဒေသည်လည်း တရား မဝင်နိုင်ကြောင်းကို .... ဤ မေးခွန်းများကို မေး၍ အထောက် အထား ရယူထားနိုင်ရမည် ဖြစ်သည်။ (သွားရောက် မေးမြန်းသော အခါ သက်သေအဖြစ် မိမိတို့ ဖုန်းများဖြင့် အသံများ သွင်းယူထားစေလိုပါသည်။)
တရားမျှတသော အခြေခံ ဥပဒေ ပေါ်ပေါက်ရေးသည် မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံး၏ တာဝန်ဖြစ်သည် .. ဟု သတင်းစာများတွင် နေ့စဉ် ကြေငြာနေသည်ကို လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖေါ်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
ဤမေးခွန်းများကို မေးမြန်းခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီ ပုံစံကျင့်သုံးခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး မိမိတို့၏ အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးများကို လေ့ကျင့်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ပိုင် အခြေခံ လူ့ အခွင့်အရေးကို မသုံးနိုင်လျှင် တနိုင်ငံလုံး လွတ်မြောက်ရန် လမ်းစ မမြင်နိုင်ပါ။ ထိုကြောင့် မေးကို မေးရမည့် မေးခွန်းများ ဖြစ်ပါသည်။
ထောက်ခံရန် (သို့) ကန့်ကွက်ရန် တိုက်တွန်းခြင်း မဟုတ်ပဲ၊ ထောက်ခံမည်သူ၊ ကန့်ကွက်မည့်သူများ အားလုံး လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်သော ကိစ္စ တစ်ခု ဖြစ်သောကြောင့် တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
P.S ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ယခု စာရေးပြီးသည်နှင့် လန်ဒန်ရှိ မြန်မာသံရုံးတွင် သွားမေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
Posted by ကိုထိုက် at 11:03
Thank you. They are very sensible and helpful suggestions. What about the UK residents set upabig tent just outside the embassy and count all the 'No' votes and announce it to the public so that they can't cheat ? If the embassy later decided to announce their own result and got itabit wrong , then we can all just confirm the belief that the junta and it's servants can't read, write or to do the calculations.
21 April 2008 at 15:10
17 March 2009 at 07:30
25 March 2009 at 14:02
25 March 2009 at 14:03
85cc免費影城 愛情公寓正妹牆川藏第一美女 成人影片 情色交友網 美女視訊 美女視訊 視訊情人高雄網 JP成人影城 383成人影城 aa片免費a片下載 a片線上看aa片免費看 ※a片線上試看※sex520免費影片※ aa片免費看 BT成人論壇 金瓶影片交流區 自拍美女聊天室 aa片免費a片下載 SEX520免費影片 免費a片 日本美女寫真集 sex520aa免費影片 sex520aa免費影片 BT成人網 Hotsee免費視訊交友 百分百貼影片區 SEX520免費影片 免費視訊聊天室 情人視訊高雄網 星光情色討論版 正妹牆 383成人影城 線上85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 免費視訊聊天室 85cc免費影片 85cc免費影片 080苗栗人聊天室 080苗栗人聊天室 080中部人聊天室 080中部人聊天室 免費a片下載 免費a片 AA片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 日本av女優影片 av女優 av女優無碼影城 av女優 av女優 百分百成人圖片 百分百成人圖片 視訊情人高雄網 電話交友 影音電話交友 絕色影城 絕色影城 夜未眠成人影城 夜未眠成人影城 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 免費色咪咪貼影片 免費色咪咪貼影片 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 影音視訊交友網 視訊交友網 080視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 視訊聊天室 成人影音視訊聊天室 ut影音視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ 視訊ukiss聊天室視訊ukiss聊天室 視訊交友90739 視訊交友90739 情人視訊網 168視訊美女 168視訊美女 168視訊美女 視訊美女館 視訊美女館 免費視訊美女網 小高聊天室 小高聊天室 aio交友聊天室 aio交友聊天室 交友聊天室 交友聊天室 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 免費線上a片 免費線上a片 嘟嘟成人網站 成人漫畫 情色文學 嘟嘟成人網 成人貼圖區 情色文學成人小說 微風成人區 情色貼圖區 免費視訊聊天 免費成人圖片區 愛情公寓 愛情公寓聊天室 寄情築園小遊戲 免費aa片線上看 aa片免費看 情色SXE聊天室 SEX情色遊戲 色情A片 免費下載 av女優 俱樂部 情色論壇 辣妹視訊 情色貼圖網 免費色情 聊天室 情人視訊聊天室 免費a片成人影城 免費a片-aa片免費看 0204貼圖區 SEX情色 交友聊天-線上免費 女優天堂 成人交友網 成人情色貼圖區 18禁 -女優王國 080視訊美女聊天室 080視訊聊天室 視訊交友90739 免費a片 aio 視訊交友網 成人影城-免費a片※免費視訊聊天※85cc免費影片日本線上免費a片 免費色咪咪影片免費色咪咪影片aaa片免費看影片aaa片免費看成人影城情人視訊高雄網
5 April 2009 at 19:02
愛愛 免費 視訊影音聊天badjojo jp成人 女優a片甜心寶貝淫片區18禁漫畫天下貼圖網成人遊戲成人貼圖站八國聯軍成人嘟嘟成人網站台灣18成人網成人影城成人圖片台灣成人貼圖嘟嘟貼圖歐美貼圖片區美女貼圖片區本土自拍貼圖美女貼圖自拍走光貼圖布蘭妮貼圖區月宮貼圖一葉晴貼圖區布蘭妮貼圖片區百分百貼圖區天下貼圖台灣kiss情色貼圖區洪爺成人貼圖區av貼圖台灣美女貼圖區kiss911貼圖片區只有貼圖一葉晴貼圖片區色情貼圖美穴自拍貼圖百分百色情貼圖亞洲情色貼圖區成人貼圖站嘟嘟貼圖區漫畫貼圖免費貼圖片區熊貓貼圖區視訊交友aooyy情色電影聊天室avooo18成人avooo素人女優影片美女交友 av女優 美女視訊麗的色遊戲手機成人動畫下載avdvd-影片免費下載偷窺情色部落格環球av影音城av1688影音娛樂網av1688天使娛樂網家庭教師影片一夜聊天室粉喵聊天室入口av0401免費視訊影音城成人a片論壇a片 下載 免費俱樂部免費視訊聊天日本avdvd介紹免費觀賞成人圖片分享成人短片aio交友愛情館成人網站- 嘟嘟情人色網18禁 免費成人 小說網情色文學論壇aa片免費看影片
5 April 2009 at 19:15
聊天室交友 網色美眉部落格sex999 免費影片免費視訊173liveshow免費視訊聊天室免費視訊gogo免費視訊ggo免費視訊美女免費視訊交友免費視訊聊天區視訊交友90739080視訊聊天室視訊美女34cc聊天室ukisssex888影片區sex888免費影片分享區sex888免費電影豆豆聊天室dodo豆豆聊天室辣妹視訊辣美眉173show影片視訊聊天室sogou搜狗音樂百分百貼影片區aaaa片免費看日本美女寫真集百分百貼圖區線上a片色咪咪影片免費視訊聊天免費影片免費視訊本土自拍免費聊天情色自拍情色貼片區本土自拍網情人視訊高雄網情人視訊聊天室視訊交友網男人幫論壇免費ava片線上看免費av18禁影片台灣kiss情人視訊網色色網a片天下第一色站小魔女免費影片小幻好玩遊戲小澤瑪莉亞小弟弟貼影片aaaaa片俱樂部影片卡通aa片子百分百貼成人圖片百分百貼影片區尋夢園聊天室交友愛情館交友愛戀速配網交友ggoo交友聊天室pc交友愛叭噗小遊戲aio交友愛情館aa免費看影片383成人影城
5 June 2009 at 19:33